“Waa Nacasnimo In Gabadha Ay Rafiiqa Yihiin Raysal wasaaraha Ingiriiska Loogu Diido Inay Gasho Maraykanka Booqashadeedii Somaliland Darteed” Michael Rubin Oo Ku Taliyey In Somaliland Laga Qaado Xanibaadaha Socdaalka – somalilandtoday.com
“Waa Nacasnimo In Gabadha Ay Rafiiqa Yihiin Raysal wasaaraha Ingiriiska Loogu Diido Inay Gasho Maraykanka Booqashadeedii Somaliland Darteed” Michael Rubin Oo Ku Taliyey In Somaliland Laga Qaado Xanibaadaha Socdaalka
(SLT-Hargeysa)-Michael Rubin oo aqoon-yahan ka tirsan machadka American Enterprise Institute, isla markaana ka tirsanaan jiray Wasaaradda Gaashaan-dhiga dalkaas, ayaa Maraykanka u soo jeediyey in la joogo xiligii saxda ahaa ee Maraykanku qunsuliyad ka furan lahaa Somaliland isla markaana ku yeelan lahaa xafiis diblomaasiyadeed oo la mid ah kuwa uu ku leeyahay Kurdiyiinta Ciraaq iyo Taiwan.
Michael Rubin wuxuu sidaas ku sheegay warbixin uu maanta ku daabacay Wargeyska Washington Examiner oo ay soo xigatay Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, waxaanu nacasnimo ku tilmaamay go’aanka Dawladda Maraykanku ay fiisihii ugu diiday gabadha ay isku lammaan yihiin Ra’iisul-wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo la yidhaahdo Mrs. Carrie Symonds oo u dhalatay UK, taasi oo dal-ku-galkii Maraykanka loogu diiday inay booqatay sannadkii hore Jamhuuriyadda Somaliland.
Michael Rubin wuxuu sheegay in Somaliland oo hore u ahaan jirtay mustacmarad Ingiriisku xukumi jiray isla markaana ay aqoonsadeen dawladaha waaweyni ee adduunka, ka hor intii aanay si iskeed ah ula midoobin Soomaalidii Talyaanigu xukumi jiray.
Rubin wuxuu sheegay in Somaliland ay hirgelisay dawladnimo dimuqraadi ah oo shaqeynaysa, waxaanu tilmaamay inay Somaliland xukunto dhul masaafadiisu dhan tahay 50 kun oo Mayl oo laba jibaaran, halka dawladda Muqdisho oo Maraykanku bilaayiin doolar geliyeyna ay ka taliso 50kun oo tallaabo.
Khabiirku wuxuu sheegay in haweenayda ay rafiiqa yihiin Ra’iisul-wasaaraha Ingiriiska ay ku tagtay Sannadkii hore Somaliland, iyadoo ay weheliso gabadha reer Somaliland ee u ololaysa cidhibtirka gudniinka fircooniga, waxaanay booqdeen cisbitaalka Edna Aadan oo ahaan jirtay Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somaliland.
Aqoon yahan Michael Rubin wuxuu intaas raaciyey inay Somaliland hoggaaminayso wax ka qabashada arrimaha deegaanka dabiiciga ah ee mandaqada oo ay si adag dagaal ugula jirto xakameynta dhuxulaysiga iyo ka ganacsiga duurjoogta, waxaanuy iftiimiyey in dugsiga Abaarso ee magaalada Hargeysa ay ardaydii ka soo baxday wax ka bartaan jaamacadaha waaweyn ee Maraykanka iyo Ingiriiska.
Khabiirku wuxuu ku booriyey inay dawladda Maraykanka si isku mid u taakulayso dawladaha Somaliland iyo Soomaaliya. Waxaanu ku dooday inay Somaliland tahay dal xasiloon oo soo jiidanaya shirkadaha caalamiga ah sida shirkadda Coca Cola oo ganacsi ku leh.
Sidoo kale waxa uu xaqiijiyey inay Somaliland tahay meel aanay Cagta saarin Madaxweyne Soomaaliya ka socdaa muddo tobannaan sanno ah, waxaanu qiray inay Somaliland tahay dal ka duwan Soomaaliya sida ay u kala duwan yihiin Shiinaha iyo Taywaan oo kale, waxaanu kula taliyey Maraykanka inay ka qaadaan Somaliland xanibaadaha Socdaalka.